बहाना गाउँपालिका भवन उद्घाटन, कोइराला गढमा देउवाको भने अर्कै दाउ !
विराटनगर | मंसिर ५, २०७८
कांग्रेस महाधिवेशन नजिकिएसँगै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा माहोल बनाउन लागिपरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आइतवार सुनसरी गएर सम्बोधन गरे ।
देवानगञ्ज गाउँपालिकाको नवनिर्मित भवन उद्घाटन भनिए पनि खासमा देउवा कोइरालाको गढ रहेको क्षेत्रमा आफ्नो माहोल बनाउन चाहन्थे । त्यसैले त उनले बीपी कोइरालाले राजनीति गरेको ठाउँमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरे ।
सो गाउँपालिका सुनसरी क्षेत्र २ मा पर्छ । यहाँ कांग्रेसको कोइराला पक्षको पकड क्षेत्र मानिन्छ । २०१५ फागुन ७ गते बीपी कोइरालाले सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए । प्रदेश सभामा राजीव कोइराला सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका हुन् ।
गाउँपालिकाका कर्मचारी पनि गाउँपालिकाको कार्यक्रम जस्तो देखिए पनि यथार्थमा देउवा पक्षको रहेको बताउँछन् । कार्यक्रम देउवा पक्षकै कांग्रेस कार्यकर्ताले सञ्चालन गर्नुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । कांग्रेस देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडा सभापति राजु मेहताले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
‘मैले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए आज नै झोला बोकेर हिँड्ने अवस्था आउने थियो,’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुनमणि गुरागाईँले भने, ‘कार्यक्रम महाधिवेशन लक्षित गरेर गरीएको हो ।’
सुनसरीका जिल्ला सभापति तथा कांग्रेस प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले देउवाप्रति लक्षित गर्दै बीपीले राजनीति गरेको ठाउँमा अरूले सोच्न पनि नसक्ने बताए । उनले खोला तटबन्ध तथा खाद्यान्नको उर्वर भूमि रहेको क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नसमेत सभापति एवं प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवालाई आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशको परिवर्तनका लागि पुनः एक पटक देउवालाई सभापति बनाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले सुनसरी देउवाको पक्षमा रहेको दाबी गरे । देउवाको पक्षमा माहोल बनाउन कार्यकर्तालाई उनले निर्देशनसमेत दिए ।
यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने कार्यक्रम नितान्त देउवा पक्षको थियो, देउवाको पक्षमा माहोल बनाउन थियो ।
देउवाले आफ्नो पक्ष सुनसरीमा कमजोर देखेपछि सहमतिबाट अधिवेशन गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । उनले कोइराला पक्षको गढ क्षेत्रमा आएर सर्वसम्मत नभए मात्रै चुनाव गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका हुन् । आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन उनी सो क्षेत्रमा आएको कांग्रेसकै कार्यकर्ताहरू बताउँछन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष लालीप्रसाद मेहता उनी निकट भएकाले बहाना बनाएर देउवालाई ल्याएको कोइराला पक्षका एक नेताले आरोप लगाए ।
देउवाले ९ करोडको लागतमा देवानगञ्ज गाउँपालिकाको ३ वटा हलसहित ३६ कोठे अढाई तले भवनको उद्घाटन गरे । यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वडा नम्बर १ स्थित बीपी कोइराला पार्कको पनि उद्घाटन गरे ।
इन्स्पेक्टरसम्मको सरुवा-बढुवाको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ- गंगा चौधरी
नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले इन्स्पेक्टरसम्मको सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताएकी छन् । सोमवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसद चौधरीले प्रदेशको अधिकारलाई केन्द्रबाट ख...
औसतमा नेपालको तापमान वृद्धिदर अधिक छ, हामी जोखिम क्षेत्रमा छौं– विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेती